U-MISTER SIXTY PACK | Scrolla Izindaba
U-MISTER SIXTY PACK
UPhilip Mnunu, owaziwa ngelikaBra Fix, ubelokhu engundabamlonyeni eLokishini laseZwide e-Port Elizabeth kusukela ngawezi-1980.
Yize manje eseneminyaka engama-60, akuyona imfihlo ukuthi izintokazi zisamthanda – nobudlakela bakhe.
“Uma engena esiteji emiqhudelwaneni uhlanyisa abesifazane,” kusho uSiyabulela Qandana ongumnikazi wendawo yokuzivocavoca i-Ironman.
“Sinamalungu angama-80 kanti uBra Fix uyisikhuthazo kithi sonke. Akekho umuntu oyisidlakela njengaye.”
Uzakwabo aqeqesha naye, uJabulile Ngowebo, oneminyaka engama-27, uthe wayengumfana omncane ngesikhathi eqala ukubona uBra Fix futhi ulandela uhambo lweqhawe lakhe.
“Ngaqala ukuzivocavoca ukuba nomzimba othandekayo njengaye.”
Ekhuluma nabakwa-Scrolla.Africa ngesikhathi ezilolonga ngoLwesibili ekuseni esikoleni samabanga aphezulu eMyezo, uBra Fix uthe izinsuku lapho umkhaba uyinkomba yokuthi umakoti womuntu obemnakekela seziphelile.
“Ukuqina emzimbeni kungisizile ukuthi ngihlale ngiwumqemane. Anginakho ukudla okukhethekile futhi angizisebenzisi izithayiselayo. Angiphuzi futhi angibhemi futhi angikaze ngiye kudokotela,” uyasho.
“Kodwa ngisenza ama-squats angama-200 anesisindo esingu-200kg nsuku zonke.”
Uthe abesifazane bayamcela ukuthi aqeqeshe abayeni babo.
“Bangicela ukuthi ngibasize ukuqeda umkhaba futhi babe ne-six pack njengami,” ehleka.